I-Glucometer Keyassens: inani, ukubuyekezwa kanye nemiyalo esetshenzisiwe > Amamitha kashukela egazi
Ukubuyekezwa kwe-Glucometer Optima
Lapho uhlola intengo kanye nekhwalithi yamadivayisi wokulinganisa ushukela wegazi, i-CareSens N iyindlela enhle yesifo sikashukela. Ukuze wenze isivivinyo futhi uthole izinkomba ze-glucose, kuyokwehla kwegazi elincane kuphela elinomthamo ongu-0,5 μl. Ungathola imiphumela yocwaningo ngemizuzwana emihlanu.
Ukuze idatha etholakele inembe, kufanele kusetshenziswe kuphela imichilo yoqobo yoqobo lwedivayisi. Ukulungiswa kwedivayisi kwenziwa nge-plasma, kuyilapho imitha ihambisana nazo zonke izidingo zezempilo zomhlaba wonke.
Le yidivayisi elungile impela, enomklamo ocatshangelwe kahle, ngakho-ke ubungozi bokuthola izinkomba ezingalungile mncane. Kuvunyelwe ukuthatha igazi kokubili kusukela emunweni nasentendeni yesandla, engalweni, emlenzeni ophansi noma ethangeni.
I-KeaSens N glucometer yenziwa icubungula bonke ubuchwepheshe besimanje bamuva. Le yidivayisi ehlala isikhathi eside, enembile, ephezulu futhi esebenza kahle kumakhi waseKorea I-Sens, ngokunembile ongabhekwa njengenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zohlobo lwayo.
Umhlaziyi uyakwazi ukufunda ngokuzenzakalelayo ukufakwa kwekhodi yokuhlolwa, ngakho-ke umuntu onesifo sikashukela awadingi ukukhathazeka ngokubheka izinhlamvu zekhodi ngaso sonke isikhathi. Indawo yokuhlola ingadonsa isamba segazi elifunekayo ngevolumu engekho ngaphezulu kwe-0.5 μl.
Ngenxa yokuthi i-kit ifaka i-cap ekhethekile yokuvikela, ukubhoboza isampula yegazi kungenziwa kunoma iyiphi indawo elula. Idivayisi inememori enkulu, izici ezithuthukile zokuthola idatha yezibalo.
Uma udinga ukudlulisa idatha egciniwe kwikhompyuter yakho, ungasebenzisa ikhebula le-USB.
Ikhithi ifaka i-glucometer, ipeni lokuthola amasampula egazi, isethi yamalambu enanini lezicucu eziyi-10 kanye nomucu wokuhlola ukukala ushukela wegazi ngenani elifanayo, amabhethri amabili we-CR2032, icala elikahle lokuthwala nokugcina ucingo, incwadi yemiyalo nekhadi lewaranti.
Ukulinganisa kwegazi kwenziwa ngendlela yokuhlonza nge-electrochemical. Igazi eliphelele le-capillary lisetshenziswa njengesampula. Ukuthola idatha enembile, i-0.5 μl yegazi yanele.
Igazi lokuhlaziywa lingakhishwa emunweni, ethangeni, entendeni yesandla, engalweni, emlenzeni ophansi, ehlombe. Izinkomba zingatholakala ebangeni ukusuka ku-1.1 kuye ku-33.3 mmol / ilitha. Ukuhlaziywa kuthatha imizuzwana emihlanu.
Idivaysi iyakwazi ukugcina kufika ku-250 yezilinganiso zakamuva nesikhathi nosuku lokuhlaziywa.
Kungenzeka ukuthola izibalo emasontweni amabili edlule, kanti umuntu onesifo sikashukela naye angaphawula ucwaningo ngaphambi noma ngemuva kokudla.
Imitha inezinhlobo ezine zezimpawu zomsindo eziguquguqukayo ngazinye.
Njengebhethri, amabhethri amabili e-lithium ohlobo lwe-CR2032 asetshenzisiwe, anele ukuhlaziya okungu-1000.
Idivayisi inosayizi ongu-93x47x15 mm futhi inesisindo sama-gramu angama-50 kuphela ngamabhethri.
Ngokuvamile, i-CareSens N glucometer inezibuyekezo ezinhle kakhulu. Intengo yedivayisi iphansi futhi ifinyelela kuma-ruble ayi-1200.
Ungayisebenzisa kanjani insiza
Inqubo yenziwa ngezandla ezihlanzekile nezomile. Ithiphu yesibambo sokubhoboza ayikhishwe futhi isuswe. Kufakwe ilancet entsha oyinyumba ocingweni, idiski elivikelayo alikaqalwa futhi ithiphu liphinde lakhiwa.
Ileveli yokubhoboza oyifunayo ikhethiwe ngokujikeleza esiqongweni sesiphu. Idivaysi ye-lancet ithathwa ngesandla esisodwa ngumzimba, bese kuthi enye ikhiphe isilinda size ichofoze.
Okulandelayo, ukuphela komucu wokuhlola kufakwa kulokotho wemitha phezulu ngoxhumana nabo kuze kutholwe isinali yomsindo. Kusetshenziswe uphawu lomucu wokuvivinya onodonsi wegazi. Ngalesi sikhathi, onesifo sikashukela, uma kunesidingo, angenza uphawu ekuhlaziyeni ngaphambi noma ngemuva kokudla.
Ngosizo lwensiza ye-lanceol, igazi lithathwa. Ngemuva kwalokhu, ukuphela komucu wokuhlola kufakwa ekwehleni kwegazi elikhishiwe.
Lapho umthamo odingekayo wokuqukethwe utholwa, insiza yokulinganisa ushukela egazini izokwazisa ngesiginali ekhethekile yomsindo. Uma isampula yegazi ingaphumelelanga, lahla umucu wokuhlola bese uphinda uhlaziya.
Ngemuva kokuvela kwemiphumela yocwaningo, idivaysi ivala ngokuzenzakalelayo imizuzwana emithathu ngemuva kokususa umucu wokuhlola kusuka kusiteyiphu.
Imininingwane etholakele igcinwa ngokuzenzakalelayo kwimemori ehlaziya. Zonke izinto ezisetshenzisiwe zilahlwa; kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukufaka idiski lokuvikela elondeni.
Kwividiyo ekulesi sihloko, kuchazwa izici ze-glucometer engenhla.
Ukubuyekezwa mayelana nama-glucometer: okungcono ukuthenga okudala nokuncane
Ku-mellitus yesifo sikashukela sohlobo lokuqala noma lwesibili, kuyadingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi kuqashwe izinga loshukela egazini. Kulokhu, ithuluzi elikhethekile, elibizwa ngokuthi yi-glucometer, lisiza abanesifo sikashukela. Ungathenga imitha enjalo namuhla kunoma yisiphi isitolo esikhethekile esithengisa imishini yezokwelapha noma amakhasi ezitolo eziku-inthanethi.
Intengo yedivayisi yokulinganisa ushukela wegazi kuya ngomenzi, ukusebenza nekhwalithi. Ngaphambi kokukhetha i-glucometer, kunconywa ukuthi ufunde izibuyekezo zabasebenzisi asebevele bakwazi ukuthenga le divayisi futhi bayizame ngokwenza. Ungasebenzisa futhi isilinganiso sama-glucometer ngonyaka ka-2014 noma u-2015 ukukhetha idivaysi efanelekile kunazo zonke.
Ama-Glucometer angahlukaniswa izigaba eziningi eziphambili, kuya ngokuthi ngubani ozowusebenzisa ukukala ushukela wegazi:
Ukwelashwa kwamalunga, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-DiabeNot. Ukubona ukuthandwa kwalo mkhiqizo, sinqume ukukunikeza ukunakwa kwakho.
Idivayisi yabantu abadala abanesifo sikashukela,
Idivayisi yabantu abasha abathola isifo sikashukela,
Idivayisi yabantu abaphilile abafuna ukubheka impilo yabo.
Iziguli ezinjalo ziyelulekwa ukuthi zithenge imodeli elula kakhulu nethembekile yensiza yokulinganisa ushukela wegazi.
Lapho uthenga, kufanele ukhethe i-glucometer enecala eliqinile, isikrini esibanzi, izimpawu ezinkulu nenombolo encane yezinkinobho zokulawula. Kubantu asebekhulile, amadivaysi alula ngosayizi afaneleke kakhulu, awadingi ukufaka okubhaliwe usebenzisa izinkinobho.
Intengo yemitha kufanele ibe ngaphansi, akudingeki ukuthi ibe nemisebenzi efana nokuxhumana nekhompyutha yomuntu siqu, ukubalwa kwezibalo eziphakathi nesikhathi esithile.
Kulokhu, ungasebenzisa le divayisi ngenombolo encane yememori nesivinini esiphansi sokulinganisa ushukela wegazi esigulini.
Amadivayisi anjalo afaka i-glucometer enempendulo enhle evela kubasebenzisi, efana:
I-Accu Check Mobile,
I-VanTouch Khetha okulula,
Ngaphambi kokuthenga insiza yokulinganisa ushukela wegazi, udinga ukutadisha izici zemivimbo yokuhlolwa. Kunconywa ukuba ukhethe i-glucometer enemichilo emikhulu yokuhlola, ukuze kulungele abantu asebekhulile ukukala igazi ngokuzimela. Udinga futhi unake ukuthi kulula kanjani ukuthenga le mishanguzo ekhemisi noma esitolo esikhethekile, ukuze ngokuzayo kungabi nezinkinga zokuzithola.
Idivaysi ye-Contour TS iyimitha yokuqala engadingi ukufaka amakhodi, ngakho-ke umsebenzisi akadingi ukuthi ngekhanda iqoqo lezinombolo isikhathi ngasinye, faka ikhodi noma afake i-chip kudivayisi. Imichilo yokuhlola ingasetshenziswa izinyanga eziyisithupha ngemuva kokuvula iphakheji. Le yidivayisi elungile kahle, okuyi-plus enkulu.
I-Accu Chek Mobile iyithuluzi lokuqala elihlanganisa imisebenzi eminingi ngasikhathi sinye. Ikhasethi yokuhlola yokwahlukanisa engama-50 isetshenziselwa ukukala amazinga kashukela wegazi, ngakho-ke imichilo yokuhlola ayidingi kuthengwa ukukala ushukela wegazi. Kubandakanya ipeni lokubhoboza elixhunywe ocingweni, olufakwe lancet encane kakhulu, ekuvumela ukuthi wenze ukubhoboza ngokuchofoza okukodwa nje. Ngaphezu kwalokho, ikhithi yedivayisi ifaka ikhebula le-USB lokuxhuma kwikhompyutha.
I-VanTouch Select glucometer iyindawo elula kakhulu futhi enembile kashukela wegazi onemenyu elula yolimi lwaseRussia futhi uyakwazi ukubika amaphutha ngesiRashiya. Idivaysi inomsebenzi wokufaka amamaki mayelana nokuthi isilinganiso sithethwe nini - ngaphambi noma ngemuva kokudla. Lokhu kukuvumela ukuthi uqaphe isimo somzimba futhi unqume ukuthi yikuphi ukudla okuzuzisa kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Idivaysi elula kakhulu, lapho ungadingi ukufaka ikhodi, yi-VanTouch Khetha i-glucometer elula. Imichilo yokuhlola yale divayisi inekhodi echazwe ngaphambilini, ngakho-ke umsebenzisi akadingi ukukhathazeka ngokuhlola isethi yezinombolo. Le divayisi ayinayo inkinobho eyodwa futhi ilula ngangokunokwenzeka kubantu asebekhulile.
Ukufunda ukubuyekezwa, udinga ukugxila emisebenzini esemqoka idivaysi yokulinganisa ushukela wegazi - lesi isikhathi sokulinganisa, usayizi wememori, ukulinganisa, ukufaka amakhodi.
Isikhathi sokulinganisa sikhombisa inkathi ngemizuzwana lapho kuzonqunywa khona ushukela egazini kusukela ngesikhathi lapho kuhla khona igazi.
Uma usebenzisa imitha ekhaya, akudingekile ukusebenzisa ithuluzi elisheshayo. Ngemuva kokuthi idivaysi iqede ukufunda, kuzokhala imisindo ekhethekile.
Inani lememori lifaka inani lezifundo zakamuva amamitha akwazi ukuzikhumbula. Inketho enhle kunazo zonke izilinganiso ze-10-15.
Udinga ukwazi ngento efana nokubalwa. Lapho kulinganiswa ushukela wegazi ku-plasma yegazi, amaphesenti ayi-12 kufanele akhishwe emiphumeleni ukuze athole umphumela oyifunayo wegazi lonke.
Yonke imichilo yokuhlola inekhodi yomuntu ngamunye lapho idivayisi yakhelwe khona. Ngokuya ngemodeli, le khodi ingafakwa ngesandla noma ifundwe ku-chip ekhethekile, elungele kakhulu abantu asebekhulile abangadingi ngekhanda bese beyifaka kumamitha.
Namuhla emakethe yezokwelapha kukhona amamodeli ambalwa we-glucometer ngaphandle kokufaka amakhodi, ngakho-ke abasebenzisi abadingi ukufaka ikhodi noma ukufaka i-chip. Amadivaysi anjalo afaka amadivaysi okulinganisa ushukela wegazi Kontur TS, VanTouch Select Simple, JMate Mini, Accu Check Mobile.
Kubantu abasha abaneminyaka engu-11 kuye kwengama-30, amamodeli afanele kunazo zonke yilawa:
I-Accu Chek Performa Nano,
I-Van Touch Ultra Easy,
Intsha ngokuyinhloko igxile ekukhetheni idivaysi eyinkimbinkimbi, elula futhi yanamuhla yokulinganisa ushukela wegazi. Zonke lezi zinsimbi ziyakwazi ukukala igazi ngemizuzwana nje embalwa.
Idivaysi ye-EasyTouch GC ilungele labo abafisa ukuthenga idivaysi yonke yokulinganisa ushukela wegazi ne-cholesterol ekhaya.
Amadivayisi we-Accu Chek Performa Nano kanye ne-JMate adinga umthamo omncane wegazi, ofanele kakhulu ezinganeni ezisencane.
Amamodeli wesimanje kakhulu yi-Van Tach Ultra Easy glucometer, enemibala ehlukene yecala. Kubantu abasha, ukufihla iqiniso lalesi sifo, kubaluleke kakhulu ukuthi idivaysi ifane nedivaysi yesimanje - isidlali noma i-flash drive.
Amadivayisi wabantu abaphilile
Kubantu abangenaso isifo sikashukela, kepha abadinga ukubheka njalo amazinga kashukela egazini, imitha ye-Van Tach Select Simple noma i-Contour TS ilungile.
Kwedivayisi i-Van Touch Khetha i-Simple, imichilo yokuhlola iyathengiswa ngocezu lwezingcezu ezingama-25, ezilungele ukusetshenziswa okungavamile kwensiza.
Ngenxa yokuthi azixhumani nomoya-mpilo, imichilo yokuhlola yoMjikelezo Wezimoto ingagcinwa isikhathi eside ngokwanele.
Kokubili lokho namanye amadivayisi awafuni ukufaka ikhodi.
Lapho uthenga insiza yokulinganisa ushukela wegazi, kubalulekile ukunaka ukuthi i-kit ngokuvamile ifaka kuphela imichilo engu-10-25 yokuhlola, ipeni lokubhoboza nezinqe eziyi-10 zokusampula kwegazi okungenashlungu.
Ukuhlolwa kudinga umucu wokuvivinya owodwa kanye nelancani elilodwa. Ngalesi sizathu, kungcono ukuthi ubale ngokushesha ukuthi izilinganiso zegazi zizothathwa kangaki, futhi uthenge amasethi wemithi yokuhlola engu-50-100 nenombolo ehambisanayo yama-lancets. Kungcono ukuthenga ama-lancets universal, afanele kunoma imuphi umfuziselo we-glucometer.
Ngakho-ke ukuthi abanesifo sikashukela bangabona ukuthi imuphi amamitha alungele ukukala ushukela wegazi, kukhona isilinganiso samamitha we-2015. Kubandakanya amadivayisi alula kakhulu futhi asebenzayo kusuka kubakhiqizi abaziwayo.
Idivayisi ephatheka kahle ka-2015 kwakuyimitha ye-One Touch Ultra Easy kusuka kuJohnson & Johnson, intengo yayo engama-ruble angama-2200. Iyithuluzi elisebenziseka kalula futhi elihlangene elinesisindo sama-35 g kuphela.
Idivaysi ehlangene kunazo zonke ka-2015 ibhekwa njengemitha yeTrueresult Twist kusuka eNipro. Ukuhlaziywa kudinga kuphela i-0.5 μl yegazi, imiphumela yocwaningo ivela esibukweni ngemuva kwemizuzwana emine.
Imitha enhle kakhulu ngo-2015, ekwazi ukugcina imininingwane kwimemori ngemuva kokuhlolwa, yaqashelwa i-Accu-Chek Asset yakwaHoffmann la Roche. Idivaysi iyakwazi ukugcina izilinganiso ezifika ku-350 zamuva ezikhombisa isikhathi nosuku lokuhlaziywa. Kukhona umsebenzi olungele ukumaka imiphumela etholwe ngaphambi noma ngemuva kokudla.
Idivaysi elula ka-2015 yaqashelwa njengemitha yesampula ye-One Touch Select kusuka kuJohnson & Johnson. Le divayisi elula futhi elula ilungele asebekhulile noma izingane.
Idivaysi elula kakhulu ka-2015 ibhekwa njengedivayisi ye-Accu-Chek Mobile evela kuHoffmann la Roche. Imitha isebenza ngesisekelo sekhasethi enemigqa yokuhlola engu-50 efakiwe. Futhi, ipeni lokubhoboza lifakwa ezindlini.
Isisetshenziswa esisebenza kakhulu sika-2015 kwakuyi-Accu-Chek Performa glucometer evela kwiRoche Diagnostics GmbH. Inomsebenzi we-alamu, isikhumbuzi sesidingo sokuhlolwa.
Idivayisi ethembeke kakhulu ka-2015 yaqanjwa ngokuthi yi-Vehicle Circuit kusuka eBayer Cons.Care AG. Le divayisi ilula futhi ithembekile.
Ilabhorethri enhle kakhulu ka-2015 yaqanjwa ngokuthi i-Easytouch device ephathekayo evela enkampanini iBaioptik. Le divayisi uyakwazi ukukala kanyekanye izinga le-glucose, cholesterol ne-hemoglobin egazini.
Idivaysi ye-Diacont OK evela ku-OK Biotek Co yaqashelwa njengohlelo oluhle kakhulu lokuhlola ushukela wegazi ngo-2015. Lapho udala imichilo yokuhlola, kusetshenziswa ubuchwepheshe obukhethekile, obukuvumela ukuthi uthole imiphumela yokuhlaziywa cishe akunaphutha.
Ama-glucode ngamadivayisi aphathekayo enzelwe ukuthola amazinga kashukela egazini emaminithini. Zingasetshenziswa elabhorethri nasekulawulweni kwe-glycemic ekhaya. Namuhla, umkhiqizo onjalo ungatholakali kuphela emizini yabanesifo sikashukela, kodwa futhi kubo bonke abantu ababheka impilo yabo ngokucophelela.
I-glucometer yesimanje inezingxenye eziningana, eziqinisekisa ukuthembeka nokulula kwenqubo yokulinganisa.
Ibhethri Kudingekile ukuqinisekisa impilo yebhethri. Amabhethri ajwayele ukusetshenziswa, angahle athengwe kunoma yisiphi isitolo. Amadivayisi ngaphandle kokushintshwa okuzimele noma ukuphinda anike amandla athandwa kakhulu empilweni yansuku zonke.
Idivaysi eyinkimbinkimbi enkulu ifakwe isibonisi nezinkinobho ezisebenzayo zokubuka inkumbulo yesehlakalo nemiphumela yakamuva. Isibonisi sibonisa inani elitholiwe. Ngokuya calibration, kungahlinzwa i-plasma noma i-capillary igazi.
Imichilo yokuhlola. Ngaphandle kwalokhu okungasebenziseka, ukulinganisa akunakwenzeka. Namuhla, imodeli ngayinye inemizila yayo yokuhlola.
Ithuluzi lokubhoboza iminwe (i-lancet). Kukhethwe imodeli ngayinye yesiguli ngasinye.Ukukhetha kuyame ngobukhulu besikhumba, imvamisa yezilinganiso, ukuthi kungenzeka ukugcinwa nokusetshenziswa ngakunye.
Abamele amadivaysi avela kubakhiqizi abaziwayo basekhaya nabangaphandle banezindlela ezi-2 eziphambili zokusebenza
Photometric. Lapho i-glucose ingena emgqeni wokuhlola, i-reagent ipendwe ngombala ohlukile, ubukhulu bawo obucacisa ukugcwala koshukela ngohlelo oluhlanganisiwe lwamehlo.
I-Electrochemical. Lapha, umgomo wemisinga emincane kagesi isetshenziselwa ukuthola umphumela. Lapho i-reagent isebenzisana nethonsi legazi emgqeni wokuhlola, umhlaziyi uqopha inani futhi abale ukubalwa kweglucose kusampula.
Abahlaziyi abaningi basekhaya ngokuqondile luhlobo lwesibili, ngoba bahlinzeka ngenani eliqonde kakhulu (isb., Iphutha elincane kakhulu).
Ungayikhetha kanjani i-glucometer?
Umthetho oyisisekelo wokukhetha ukusebenzisa amandla nokutholakala kwemisebenzi edingekayo. Isiguli ngasinye singadinga izici ngazinye, okusho ukuthi idivaysi ethile ifanelekile. Isilinganiselo esibalulekile izindleko zegajethi uqobo nemichilo yokuhlola, ukutholakala kwabo kokuphinda kufakwe kabusha amasheya ngesikhathi.
Idivayisi kumele ikhiqize umphumela onembile kunayo yonke. Ngaphandle kwalokho, iphuzu lonke lokuthenga liyalahleka. Indlela eqinile futhi ngokucophelela ngokwesiko yokuhlola ushukela ezinganeni nakwabesifazane abakhulelwe.
Imvamisa into ebalulekile ekukhetheni i-glucometer usayizi wethonsi legazi elidingekayo ekuhlolweni. Uma kudingeka kancane, kulula kakhulu futhi kulula. Kunzima ikakhulukazi ukuthola ithonsi legazi elikhulu kusuka ezinganeni noma, ngokwesibonelo, ngemuva kokuba eqandeni elinzima.
Vele, izakhiwo ezibalulekile zabanye abantu azibalulekile ngokuphelele kwabanye. Isibonelo, iningi lentsha elisebenzayo lifuna amamodeli wegajethi amancane kakhulu, futhi ogogo, kunalokho, badinga idivaysi enesibonisi esikhulu nobuncane bokuxaka.
Izinhlobo ezaziwa kakhulu nge-Accu Chek, i-Van Touch Select, i-Ai Chek, iKontur, iSattelit. Okunye okuthengisiwe bekuyi-glucometer yokuqala engahlaseli, ekuvumela ukuthi unqume ushukela wegazi ngaphandle kokunaka umunwe wakho. Ngokungangabazeki, intuthuko enjalo iba nekusasa elihle. Kepha kuze kube manje, amadivayisi awafani ngokunemba okudingekile futhi awakwazi ukuyishintsha ngokuphelele indlela ye-classical yokulinganisa ushukela. Isibonelo esisodwa se-tonometer-glucometer Omelon A1.
Ungayisebenzisa kanjani imitha?
Izici eziyinhloko zokusebenzisa imodeli ethile zihlala zikhonjisiwe kwimiyalo, kepha kunemigomo eyisisekelo yokwenza izilinganiso zikashukela ezinembile futhi eziphephile ekhaya.
Njalo geza izandla zakho ngensipho ngaphambi kokukala bese uzesula ngethawula. Kudingeka ihlolwe kuphela iminwe eyomile.
Gcina i-lancet ivalwe ngokuqinile ukuvikela ubungozi bokutheleleka ngenaliti
Ukukala, thatha umugqa owodwa wokuhlola, uwufake kumamitha. Linda kuze kube yilapho i-appliance isilungele ukusebenza.
Pierce umunwe wakho endaweni efanele
Letha umucu wokuhlola ekwehleleni kwegazi le-capillary
Faka inani elidingekayo lesampula bese ulinda imizuzwana engu-3-40 ngenkathi ucubungula umphumela
Ngcolisa indawo yokubhoboza
I-Glucometer, imiyalo esetshenzisiwe. Ubani, ngani, kanjani? Imininingwane nesinyathelo ngesinyathelo
Imitha yeglucose yasekhaya iyithuluzi elibaluleke kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela, futhi ikakhulukazi uma kukhulunywa ngomuntu osekhulile okunzima ukuthola iminikelo yegazi ehleliwe, futhi abanesifo sikashukela badinga ukubhekwa njalo kweglucose yegazi.
Imitha ye-EBsensor Kuthengiswa ngokwahlukahluka okuningi: ngemichilo yokuhlola, esimweni, ngaphandle kwecala, kuphela ithuluzi ngaphandle kokubhoboza, njll. Ngithathe isethi ephelele kuleli cala ukuze kungalahlwa lutho.
Ebhokisini - icala eline-zipper ene-kit yenqubo nemiyalo. Uma ubona kabi, chofoza isithombe ukwandisa. Uma kusenzima ukubona, chofoza futhi)
Lokhu kusethi ephelele efaka
Imitha ye-glucose ye-EBsensor (imitha kashukela wegazi)
Imicu yokuhlola insimbi yethuluzi
Ithuluzi lokufaka iminwe
Ama-Lancets - 10pcs
Imivimbo yokuhlola ukuthola ukuthi ushukela egazini - 10pcs
Ibhethri, thayipha i-AAA, 1.5 V - 2 ama-PC.
Imiyalo yokusebenzisa imichilo yokuhlola
Vele, ngincoma ukuthenga ecaleni, hhayi ngokuhlukile, ukuze kungalahlwa lutho!
Ngemuva kwalokho sizolungisa ithuluzi lokubhoboza umsebenzi.
Susa i-cap, faka i-lancet
Bese ubeka cap
Manje udinga ukusetha ukujula kokujovwa, okuhlukahluka kusuka koku-1 (okuphelele kakhulu kubantu abanesikhumba esincane) kuya ku-5 (kubantu abanesikhumba esinyene). Kunconywa ukuqala nge-1, kodwa ngisebenzisa indlela yokuhlola, ngithole ukuthi i-3 kufanelekile, kwiyunithi isikhumba sivele singabhobozi.
Ngemuva kwalokho sidonsa isivalo sedivayisi yokubhoboza ize ichofoze.
Geza izandla zethu bese ukhipha umucu wokuhlola bese usifaka kumitha
Ngemuva kwalokho, inombolo kufanele ivele kuqapha elihambisana nenombolo kwiphakheji nemichilo yokuhlola. Kulokhu, idivaysi ikhipha isiginali yomsindo nethonsi lishayeka kuqapha, okusho ukuthi idivaysi isilungele ukusebenza.
Uma sibona enye into kwi-track, lokhu kusho ukuthi idivaysi ayilungele ukusebenza futhi udinga ukufaka kabusha umucu wokuhlola
Okulandelayo, sicindezela insimbi yokubhoboza isixhobo somunwe bese sicindezela inkinobho yokuvala.
Ukudunwa akunazinhlungu ngokuphelele, ngakho-ke ukhohlwe le mizwa emibi eyenzeka emtholampilo ngemuva kokuthi umalumekazi omubi egwaze umunwe)) Ekuqaleni ngaze ngacabanga ukuthi inaliti ayenzanga ukubhoboza futhi ngifuna ukuyiphinda, ngangiqonda kuphela ngethonsi legazi elincane.
Ngemuva kokubhoboza, shaya umunwe wakho kancane ukuze uthole ithonsi legazi bese ubeka umunwe wakho phezulu kwibhande lokuhlola, asikho isidingo sokucindezela, igazi lizodonswa wedwa. Ukudonsa okuncane kwanele, ngakho-ke akudingeki ukuthi uhlukumeze umunwe wakho.
Inkomba kufanele igcwalise ngokuphelele futhi ibukeke kanjena
Susa i-cap kudivayisi yokubhoboza, isuse ngokucophelela i-lancet esetshenzisiwe bese uyilahla.
Le divayisi ayisebenzi kuphela kubantu abanesifo sikashukela, kodwa futhi nakwabesifazane abakhulelwe, kanye nalabo abaye baba nesifo sikashukela esizukulwaneni ukuze balawule amazinga kashukela egazi.
Amamitha amahle weglue kashukela.
Umlayezo Greyman » 09.02.2015, 13:25
Abavakashi bewebhusayithi yezitolo zeTest Strip bahlala bezama ukuthola intengo ekhangayo kakhulu yama-glucometer nemichilo yokuhlola. Ukuqala ngoFebhuwari 1, 2015, izitolo ze-Test Strip zinganikela ngamanani akhanga kakhulu emgqeni we-Accu-Chek wama-glucometer (i-Accu-Chek Asset, i-Accu-Chek Performa Nano), nemitha ye-OneTouch SelectSimple (i-VanTouch SelectSimple) ) kanye nemitha ye-CareSens N ye-glucose (“Caes N”). Kepha qala kuqala.
I-Rumor inokuthi izindleko ze-Accu-Chek Active ne-Accu-Chek Perform Nano glucose metres esikhathini esiseduze esizayo zingangezelelwa emindenini yabasabalalisi abakhulu ngokuthengiswa okusha. Izitolo "I-Test Strip" zifuna ukuqinisekisa abathengi bazo ukuthi sinokudla okwanele kwama-glucometer futhi bazozama ukugcina amanani aphansi kakhulu kubo isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, uma usuvele unayo i-glucometer, kepha ufuna ukuba nesandla noma unikeze othile isipho - manje isikhathi.
Ngempela, imitha entsha ye-Accu-Chek Active kunoma yisiphi isitolo sethu ibiza ama-ruble angama-590! Futhi imitha ye-Accu-Chek Performa Nano ingama-ruble angama-650 kuphela. Khumbula ukuthi wonke ama-glucometer anesiqinisekiso esingenamkhawulo. Sihlola noma yimaphi amamitha eglucose we-Accu-Chek neVanTouch athengwe noma kuphi emhlabeni (!). Akudingekile ukuthenga i-glucometer kithi, kepha siyohlala sisiza!
Ngaphezu kwalokho imitha ye-OneTouch SelectSimple (i-VanTouch SelectSimple evela enkampanini kaJohnson & Johnson Lifescan) imenyezelwe ngesaphulelo esimangazayo. Ingathengwa kunoma yiziphi izitolo zethu ngama-ruble angama-550. Kunembile futhi kulula kakhulu ukusebenzisa imitha. Akanayo inkinobho eyodwa, ngakho-ke uma ukhetha isipho somuntu osekhulile noma umngani nje - sincoma kakhulu! Wonke umuntu uzobhekana nakho!
Futhi singakongela i-gluceter yeCareSens N. elula, ethembekile, enhle gluceter enamachilo wokuhlola angabizi kakhulu. Isici esivelele sale mitha esivela kwaVanTach nase-Accu-Chek ukuthi imichilo yayo ayigcwele kangako (ayikho emakhemisi), kodwa inentengo ekhangayo futhi ungahlala uyithenga esitolo sethu. Singahlela futhi ukulethwa kwezincwadi eMoscow ngaphandle kwezinkinga noma sizithumele kuwe ngeposi laseRussia ekilasini lokuqala! Thola imitha yamahhala ye-BloodSense N. Kunezindlela ezimbili. Okokuqala, ungafika kunoma yisiphi sezitolo zethu wedwa, uthenge amaphakethe ama-2-3 wemichilo ye-CareSens N glucometer bese ucela i-glucometer yamahhala. Okwesibili, beka i-oda nge-Intanethi bese ukhombisa ekuphawuleni nge-oda olithumela noma elethe i-KeaSens N yesipho glucometer.
Sicela ulandele ukukhushulwa kwethu, okunikezwayo okukhethekile! Bhalisela i-imeyili yethu incwadi yezindaba!
1. IGlucometer 2. Imichilo yokuhlola (ama-pcs ayi-10.)
5. Ibhuku lokufundisa 6. Idayari yokuzithiba 7. Ukubamba ngomunwe
8. Ibhethri le-CR2032 - (1 pc.) 9. Imicu yokulawula 10. Amalambu (10 ama-pcs.)
Umugqa wokulawula ukuvumela ukuthi uhlole imitha uma uyisebenzisa okokuqala, uma ushintsha ibhethri noma imiphumela yokulinganisa ayihambelani nenhlala-kahle yakho. Uma ukuhlolwa kwe-glucometer ngentambo yokulawula kudlulisiwe - idivaysi iyasebenza (imininingwane engaphezulu ingatholwa emiyalweni)
Inqubo yokuhlola emfushane:
Susa umucu wokuhlola ku-vial bese uyifaka yonke indlela kuze kube yilapho imitha inika ibhiphu. Inombolo yekhodi ivela esibukweni ngemizuzwana emithathu.
Inombolo yekhodi ekubonisweni nasebhodleleni kufanele ifane. Uma ikhodi ifana, linda isithonjana se-strip test sivele esikrinini bese senza isivivinyo.
Uma ikhodi ingafani, bese ucindezela inkinobho M noma inkinobho C ukukhetha ikhodi oyifunayo.
Ngemuva kokukhetha ikhodi oyifunayo, linda imizuzwana emithathu kuze kubonakale uphawu lomugqa wokuhlola esikrinini.
Imitha isilungele inqubo yokuhlaziya.
Faka isicelo sesampula yegazi emaphethelweni amancanyana emucu wokuhlola bese ulinda kuze kube yilapho imitha inikeza isibonakaliso.
Esikrinini sedivayisi, kuzoqala ukubala kusuka ezinhlanu kuya kwelesi. Imiphumela yokulinganisa nesikhathi, isikhathi nosuku kuzovela esibukweni futhi izogcinwa ngokuzenzakalelayo kwimemori yemitha
Imivimbo ye-test strips Kea Sens No. 50 (CareSens)
Intengo ekulethweni: 690 rub.
Intengo ehhovisi: 690 rub.
Imivimbo yokuhlolwa kwama-glucometer "KarSens II" ne "KarSens POP" (ama-PC angama-50. Ku-tube).
Amaphakethe ama-3 we-CareSens No. 50 strips
Intengo ekulethweni: 2010 rub.
Intengo yehhovisi :: 2010 rub.
Ngokuthengwa ngasikhathi sinye kwamaphakethe ama-3 we-CareSens No. 50 strips, uzothola isaphulelo esingeziwe, futhi izindleko zephakethe elilodwa kuzoba ngama-ruble ayi-670. Intengo yesethi ingama-ruble angama-2010. (3 * 670 = 2010 rubles)
Amaphakethe ama-5 we-CareSens No. 50 imichilo yokuhlola
Inani lentengo ekulethweni: 3275 rub.
Intengo yehhovisi: 3275 rub.
Lapho uthenga amaphakethe ama-5 weCareSens No. imichilo yokudla engu-50, uthola isaphulelo esingeziwe, futhi izindleko zephakethe elilodwa kuzoba ngama-ruble angama-655. Intengo yesethi ingama-ruble angama-3275. (5 * 655 = 3275 rub.)
I-Universal lancets No. 25
Intengo ekulethweni: 120 rub.
Intengo yehhovisi: 120 rub.
Iqoqo lama-lancets oyinyumba yonke (izingcezu ezingama-25) zokuqoqa ithonsi legazi. Ilungele iningi labaphrinti abazenzakalelayo: I-Contour, i-Satellite, i-Van Touch, i-Clover Check, i-IME-DC, ngaphandle kwe-Accu-Chek.
Yini i-Kea Sens N glucometer?
Le divayisi iwukuqamba komkhiqizi weKorea I-Sens. Imitha inomsebenzi wokufunda ngokuzenzakalela ukufaka ikhodi, okusho ukuthi umuntu osebenzisa le divayisi akakwazi ukukhathazeka ngokubheka izinhlamvu zekhodi. Ngaso leso sikhathi, ingxenye yokuhlola ikuvumela ukuthi "uthathe" inani eliphansi legazi - kuze kufike kuma-microliters angama-0,5.
Ngokwengeziwe kudivayisi uqobo, isimbozi esivikelayo sisetshenziselwa ukucushwa, okukuvumela ukuthi uthathe amasampula egazi noma kuphi.
Vele, udinga ukubona ukusebenza okuthuthukile kwensiza, kanye nenamba enkulu yememori ekuvumela ukuthi ugcine imininingwane eminingi yokulinganisa.
Sigqamisa izici eziphambili nezinzuzo zedivayisi yeCareSens N:
Okokuqala, ngenxa yokuba khona kwenani elihle lememori kudivayisi, imitha ingagcina izilinganiso zokugcina ezingama-250 (ngenkathi ikhombisa idatha esesimweni sosuku nesikhathi sesifundo).
Okwesibili imitha kashukela egazini evela eKorea ikuvumela ukuthi uthole idatha ezifundweni ezenziwa emavikini amabili edlule. Ngaphezu kwalokho, kwisifo sikashukela, kungenzeka ukubeka amamaki ngokuthatha izilinganiso ngaphambi noma ngemuva kokudla.
Okwesithathu, ama-glucometer ambalwa anezimpawu ezi-4 zomsindo ezinezilungiselelo ngazinye, le modeli inalesi sici.
Okwesine, indlela yokusebenzisa amandla eshibhile futhi ehlala isikhathi eside isetshenziswa ngasikhathi sinye - amabhethri ama-2 akwazi “ukufaka amandla” amandla ocingo ngaphezu kokuhlaziya okungu-1000.
Okwesihlanu, ubukhulu bemishini eyamukelekile nesisindo. Isisindo sedivayisi kanye namabhethri angama-gramu angama-50, kuyilapho imitha inezilinganiso ezingama-93 ngamamilimitha angama-47 kanye nama-15, okuvumela ukuthi uthathe nawe ukuyocwaninga noma kuphi.
Okwesithupha, ukuqina kwensiza. Ungathenga le mitha bese ukhohlwa ngokuthenga enye insiza yokulinganisa iminyaka eminingi, njengoba umenzi waseKorea esebenzisa izinto zanamuhla zokuthuthuka.
Izinzuzo ezinjengalezi zenza kube nokwenzeka ukwenza ukukhetha okulungele ukuvumela lokhu kusebenza kwentando yeningi futhi kutholakale kusebenza.